Ganacsatada Ma Dhasheen? | Martech Zone
Isniin, Maarso 28, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Jack Dorsey, aasaasihii Twitter, wuxuu ka hadlayaa ganacsiga. Waan ku riyaaqay jawaabihiisa runta ah - runti wuu jecel yahay raadinta iyo xallinta dhibaatooyinka, laakiin wuxuu ku bartay inta ka hartay astaamaha lagama maarmaanka u ah ganacsadaha iyada oo loo marayo kobaca meheraddiisa.
Waxaan haystaa xoogaa aragti kale oo ku saabsan ganacsiga. Waxaan si daacad ah u maleynayaa in qof walba uu ku dhashay karti ganacsi, laakiin qaar badan oo ka mid ah waalidkeen, macallimiinteena, madaxdeenna, asxaabteena iyo xitaa dowladdeennu waxay u muuqdaan inay burburin karaan hal-abuurnimada. Cabsidu waa cadawga kaliya ee ganacsiga urs cabsiguna waa wax aan waxbaranay oo aan u soo bandhignay nolosheena oo dhan.
Cabsidu waa sababta daabacayaashu u soo saaraan buugaag qaacido leh (iyo dadka sida Seth Godin wuu caasiyoobaa). Cabsidu waa sababta filim kasta oo kale oo la sii daayaa u yahay dib u habeyn filim hore oo si fiican u qabtay. Cabsidu waa sababta qiimaha jaban, ee xaqiiqooyinka foosha xun ay u dhex mareen hawadeenna telefishanka. Cabsidu waa sababta dad badani uga shaqeeyaan shaqooyinka waalan ee aysan ku faraxsanayn… waxay aaminsan yihiin in guusha ay tahay marka laga reebo guuldaraduna waa wax iska caadi ah. Maaha. Weydii dadka iyagu iska leh meheraddooda waxaadna ogaan doontaa in badankood ay jeclaan lahaayeen haddii ay si dhaqso ah u qaban lahaayeen in badan oo iyaga ka mid ahna dib u noqon doonin.
Cabsida ayaa wiiqeysa - xitaa ganacsatada. Waan ogahay inbadan oo saaxiibo ah oo leh mala-awaal cajiib ah, laakiin cabsida ayaa ka hor istaageysa inay gartaan guushooda. Maxaa ku hortaagan?